အကူအညီများလိုအပ်လျက်ရှိသည် — MYSTERY ZILLION
September 2007 edited February 2010 in Project
အခု contributor များလိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ တကယ်လည်း လိုအပ်နေပါသည်။ မြန်မာတွေဟာ ကိုယ့်ကိစ္စနှင့် ကိုယ်မအား၍ contribute မလုပ်နိုင်တာကိုနားလည်ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့ MZ က Wiki တစ်ခုကို စတင်နေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ admin အဖွဲ့က အလုပ်များဖြင့်မအားသ၍ မှန်းထားသော ရက်သို့ရောက်ထိတိုင် public ချနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဒီနှစ်ကုန်လောက် Dec 31 ရက်နေ့ public ချဖို့မှန်းထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မှီနိုင်မယ်မထင်လို့ အခုလို အကူအညီတောင်းရတာပါ။
ကျွန်တော်တို့ အခု project က wiki တစ်ခု တည်ဆောက်ထားတာပါ။ computer ဆိုင်၇ာတွေပါပဲ။ အခုတော့ ဘာမှ မရှိသေးပါဘူး။ အလွန်ပဲ နည်းပါးနေပါသေးတယ်။ မိမိတိုက သိသလောက်ကို ဝေမျှရေးသားစေချင်ပါတယ်။ မရေးသားတတ်ဘူးဆိုလည်း ဒီမှာ post တင်သွားပါ။ ကျွန်တော်တို့တွေ တင်ပေးပါ့မယ်။ MZ wiki က MZ အပိုင်မဟုတ်ပါဘူး။ အများပိုင်ဆိုင်တာပါ။ အများက ဝင်ရောက်ရေးသား ပြင်ဆင် update လုပ်ပေးမှ ရှင်သန်နိုင်မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ဦးတည်းနဲ့ အသက်ဆက်လို့မရပါဘူး။ အကုန်လုံးရဲ့ ကူညီမှု မျှဝေမှု တွေကို အလွန်လိုအပ်ပါတယ်။
MZ Wiki ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ Computer နည်းပညာတိုးတက်စေရုံသာမက ဗဟုသုတများ တိုးပွားစေရန်နှင့် Computer စာတမ်းပြုစုနေသူများ ၊ လေ့လာနေသူများ ၊ ဗဟုသုတရှာဖွေနေသူများ ၊ မိမိ ဗဟုသုတများကို ဖြန့်ဝေလိုသူများ အပြင် အခြားအခြားသော Computer နှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို စုစည်းရေးသား ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ Computer ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းသိချင်လျှင် MZ Wiki သို့သွားဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေတာပါ။
ကူညီပေးကြပါ။ ရေးသားပေးကြပါ။ မရေးသားတတ်ဘူး ဆိုလည်း ဒီမှာ post တင်ခဲ့ပါ။ wiki ဆိုတာ contributor ရှိမှ ရှင်သန်ကြီးထွားရတာပါ။
Project ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလွန်စွာပဲကောင်းပါတယ် ..။ လက််တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာအနည်းငယ်နှောင့်နှေးမှုတွေရှိနေပါတယ် ..။ ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ပဲ ပူပေါင်းပါ၀င်ဆောင်ရွက်မှုတွေလိုအပ်နေပါတယ်..။ wiki ဆိုတာဟာအများက၀ုိင်း၀န်းပြင်ဆင်ရေးသားရတဲ့ web စွယ်စုံကျမ်းကိုဆိုလိုပါတယ်..။ဒါကြောင့် အများရဲ့ပူးပေါင်းပါ၀င်ဆောင်ရွက်မှုဟာ Project ရဲ့အဓိကအသက်သွေးကြောလို့ဆိုလို့ရပါတယ် ..။ မိမိတတ်နို််င်တဲ့ ဖက်ကနေ တတ်နိုင်သမျှ ကူညီ ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုရင် အမှန်လုပ် အဟုတ်တကယ် ဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် ..။
ကျေးဇူးပါ သူရ ... အပြောနဲ့ မဟုတ်ပဲ လက်တွေ့ ဝင်ရောက်ရေးသားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်ရယ် သူရ ရယ်ပဲ.. နှစ်ယောက်တည်း ထိုင်ရေးနေရပါတယ်။ အခြားလူတွေလည်း ကူညီစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Dec 31 မှာတော့ ဖွင့်လှစ်ဖို့ မလွယ်တော့ပါဘူး။ အခုလည်း အချက်အလက် အပြည့်အစုံမဟုတ်ပေမယ့် ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်လေးတော့ ရေးထားပါတယ်။
ကျွန်တော့်ကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောတယ်။ မင်းရဲ့ wiki ကို ငါဝင်ကြည့်တယ်တဲ့။
ကျွန်တော့် wiki မဟုတ်ပါဘူး။ MZ ရဲ့ wiki လည်း မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ MZ ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ Computer တိုးတက်ရေးအတွက် ကျွန်တော်တို့ Hosting ဝယ်ပြီးတော့ တည်ထောင်ပေးထားတာပါ။ ဘာအကျိုးအမြတ်မှလည်း မမျှော်မှန်းထားပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မျှော်မှန်းတာက အကျိုးရှိဖို့ပါ။ MZ ရဲ့ wiki မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ပြီး ကျွန်တော့် wiki လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Wiki ပါ။
နည်းပညာပိုင်းမှာ စိတ်ဝင်စားပြီး အများကို ဖြန့်ဝေလိုသူတွေ အတွက် Wiki ပါ။
လေ့လာလိုသူတွေ ၊ ဗဟုသုတ ရှာဖွေလိုသူတွေ အတွက် Wiki ပါ။
English စာဘက်မှာ အားနည်းပြီး Computerနှင့် သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းတွေကို မြန်မာလို လေ့လာလိုသူတွေအတွက် Wiki ပါ။
ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက် Wiki ပါ။
ဒါနဲ့ Wiki Link က ဘယ်မှာလဲ ပြောပြပါလား Wiki Wiki ပြောနေကြလို့ menu မှာကြည့်တာ မတွေ့ဘူး ကျွန်တော်လည်း သိသလောက် ၀င်ရေးပါ့မယ် address လေး ပြောပေးကြပါ Admin တို့ရယ်
လင့်က ဒီမှာပါဗျာ ...
wiki မှာ၀င်ရေးဖို့အတွက် register ထပ်မံလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် ..။
can i write about database concerning oracle. i have good oracle lectures and i would like to share. As far as i know, oracle is not used widely in myanmar. but oracle has 63% of world RDBMS market and 76% of world internet database market cos oracle has the best software development tools.
if u are interested in oracle for self learning, i will rewrite lectures in myanmar language. I am very poor and very slow in writing text in myanmar language cos i have no practice.
ကောင်းပါလေ့ ကိုစေတန်ရေ ၀ိုင်းပြီး အားဖြည့်ရမှာပေါ့ဗျာ.. လောလောဆယ် http://mmitdictionary.blogspot.com/ မှာ ကျွန်တော်ရေးထားတာတွေကို GUI Category အောက်မှာ ထည့်လိုက်လို့ ရပါတယ်.. ဖိုရမ် မရောက်တာ ကြာလို့ ၀ီကီ လုပ်နေတာ မသိလိုက်ဘူးဗျာ.. WiKi ဆိုရင်တော့ "၀ီ၀ီ" မြည်အောင်ကို ရေးနိုင်မှ တော်ကာကျမှာဗျို့...
ကိုင်း ဒီလောက်ဆို ဘယ်လိုလဲ အက်ဒမင်... :39:
အစ်ကိုရေ... ကျွန်တော် မသိတာတွေ ရေးထားတာပဲ..
လိုအပ်တာတွေကိုတော့ ကြိုးစားပြီး ဖြည့်ကြည့်မယ်..
ကျွန်တော်ကတော့ အစ်ကိုရေးထားတာတွေ ပြန်ဖတ်နေရတယ်..
Network နဲ့ Hardware ပိုင်းတွေဖြစ်တော့ ကျွန်တော် မသိတာ များနေတယ်..
Wiki ကို ဘယ်သူမှလဲ ကူမရေးပေးဘူး.. (
သူရ နဲ့ computer crazy ပဲ ရေးပေးတယ်... (
ဒါကြောင့် ကျွန်တော် Forum မှာ ရေးတာ ခဏရပ်ထားပြီး..
wiki ကို ပိုပြည့်စုံအောင် ရေးလိုက်အုံးမယ်ဗျာ...
MZ Wiki အတွက် logo ဆွဲပေးမယ့်သူများရှိမလား မသိဘူး..
ကျွန်တော်တို့ ပိုက်ပိုက်မတတ်နိုင်ပါဘူး.. :P
ဆွဲပေးမယ့်သူမရှိရင်တော့ အခု logo ပဲထားရတော့မယ်.. (
၀ီကီကတော့ ရှိဖို့သင့်ပါတယ်။ မြန်မာလို ရှိထားတော့ လေ့လာသူတွေအတွက် ပိုပြီကောင်းတာပေါ့။ ကျနော်လည်း ၀ီကီကို တခေါက်တော့ သွားကြည့်ပြီးပါပြီ။ ကိုယ်ကဘယ်လောက်မှ သိတာမဟုတ်တော့ ဘာရေးရမှန်း မသိဘူးဗျာ။ လက်မရဲဘူးလေ။ ကွန်ပြူတာကျောင်းမပြောနဲ့ သင်တန်းတောင် ကောင်းကောင်းတက်ခဲ့ဖူးတာမဟုတ်တော့ ... ။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်တခေါက် သွားကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။ (ရေး/မရေးတော့ မသေချာသေးဘူးနော်)။ သူများရီမှာလည်း စိုးတယ်လေ။
မပူနဲ့ http://en.wikipedia.com တစ်ခုလုံးရှိတာပဲ...
အဲဒီကနေ ဘာသာပြန်လိုက်ရင် ဖြစ်တာပဲ..
Page 500 ကျော်လောက်က လက်ရှိလိုအပ်လျက်ရှိတာ..
ဒီတရက်နှစ်ရက်ထဲမှာ တခုခုကို ကြိုးစားပြီး (ဘာသာပြန်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ) ရေးကြည့်ပါမယ်။ အခုတော့ နည်းနည်းကြိုပြီး လိုက်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်။ ဘယ်လိုတွေရှိထားပြီလဲပေါ့လေ။
ကူညီဖို ့အရည်အသွေးက မမှီလို ့ပါ..
wiki ကို အခုလို အကောင်အထည်စဖေါ်နေတာကို တွေ့ရတော့ ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်း ၀င်ကူလိုက်ပါတယ်။
ကျေးဇူးပဲဗျို့... တခြားလူတွေနဲ့မတူပဲ ဝင်ပြီးပါ discuss လုပ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပဲဗျာ..
အခု Article ပေါင်း ၉၁ လောက်ရှိပါပြီ...
ဘာအကြောင်းတွေ ထည့်သင့်လဲ အကြံတွေပေးကြပါ....
အခုတော့ ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ်ပဲ စိတ်ပေါက်ရာ အကြောင်းတွေပဲ ရေးထားတယ်...
ဒါကြောင့် PHP နဲ့ Joomla ပဲ ပြည့်စုံသလောက်ရှိတာ... :P
ကျွန်တော် လဲကူညီချင်ပါတယ်.. ဘယ်လို ကူညီရမလဲမသိဘူး..
အခုမှပဲ ဖတ်မိတော့တယ် ... ဘာမှန်းတော့ သေသေချာချာ ရေရေလည်လည်မသိသေးပေမယ့် ကောင်းတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို တွေ့ရတယ် .... လေ့လာလိုက်ဦးမယ်ဗျာ .... ကူညီလို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ ကူညီမယ်ဗျို့ .......
သားကစိတ်၀င်စားနေပြီ ...6ရက်နေ့လာဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဗျို့ hehee
ကူညီချင်တာတော့အရမ်းပဲ ... ဒါပေမယ့် ခက်နေတာက ဘာမှမတတ်တာ...
ကျွန်တော်ကတော့ ဆွေးနွေးပေးမည့် လူတွေဒီကို လာအောင် ကြော်ငြာပေးမယ် ..။
ဒါမှ ပညာများများရမှာ ။ :101:
Wiki အစီစဉ် ကတော့ ကြိုက်တယ်ဗျာ......
မြန်မာလိုဆိုတော့ တစ်ချို ့အင်္ဂလိပ်စာ အားနည်းသူတွေ၊ ငယ်ရွယ်သူတွေ လေ့လာရတာ ပိုအဆင်ပြေသလို၊ မြန်မာ IT သမား တွေ အလွယ်တကူ ေ၀မျှနိုင်တာပေါ့....
ပေါ့ပေါ့ ပါးပါးလေးတွေ ကိုတော့ Wikipedia ကဖတ်ပြီး နားလည်သလောက် ရေးကြည့်မယ်...
လိုအပ်တာတွေ ကိုတော့ တွေ ့တဲ့သူက ပြင်သွားပေးပါ...
စိတ်ချပါ Windows အကြောင်းရေးထားပါတယ်.. မကြာမီ ဖြည့်ပေးပါမယ်...
admin ကြီးနှင့် ဆိုင်ရာပိုင်ရာများခင်ဗျာ...
Wiki တွင် logon လုပ် ၀င်ရေးပြီးလိုု့
ပြန်ထွက်ချိန် logout ၌ ip address ပေါ်နေပါသဖြင့်
ထို ip address ပေါ်နေခြင်းကို ဖယ်ရှာပေးစေလိုပါတယ်...
ဒါမှ အားလုံးအတွက် အလုပ်လုပ်ရတာ ကောင်းပါတယ်....
ip address က ပေါ်တာပဲရှိပါတယ်... ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး.. ip address ပေါ်တာ ဘာဖြစ်လို့ပါလည်း ခင်ဗျာ... ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဘယ်သူတွေ ဘယ်အချိန်မှာ ဘာပြင်သွားလဲဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့ အခုချိန်ထိ moderate မလုပ်ပဲ ယုံကြည်စွာနဲ့ လူတိုင်း ရေးသားခွင့်ပြုထားပါတယ်...
ip address ပေါ်တာ ဘာဖြစ်လို့ပါလည်း ခင်ဗျာ... ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဘယ်သူတွေ ဘယ်အချိန်မှာ ဘာပြင်သွားလဲဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့ အခုချိန်ထိ moderate မလုပ်ပဲ ယုံကြည်စွာနဲ့ လူတိုင်း ရေးသားခွင့်ပြုထားပါတယ်...
user name ပဲ ပေါ်ရင်ကောင်းပါတယ်..
ip ဖော်ပြထားတော့ လုံခြုံမှုကို ထိတယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ ခံစားမိတယ်..
တခြား http://www.chickipedia.com/Main_Page တွေမှာ ip မပေါ်ပါဘူး၊
ဟုတ်ကဲ့.. ကျွန်တော် mediawiki ကိုပြန်လေ့လာပြီး အဲဒါလေး ဖြုတ်ပေးပါ့မယ်.. အခုတလော မအားသေးတာကြောင့်ပါ... mediawiki ကိုပြန်လေ့လာလိုက်အုံးမယ်.. ပြီးရင်တော့ ဖြုတ်ပေးပါ့မယ်..
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... Admin ကြီး
ယခုလို mysteryzillion အပေါ် ဂရုစိုက်မှုကို လေးစားပါတယ်...
သင်္ကြန်ရက်မှာ mpt က down ထားတော့ ယနေ့မှပဲ MZ ကို
ကျွန်တော်လဲ၀င်ရောက်ရေးသားချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဘာမှမသိသေးတော့မရေးရဲဘူးဖြစ်နေတယ်။ တနေ့နေ့တော့၀င်ရေးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ Mz အတွက်ကြိုးစားသွားမှာပါ။
သိပ်ကိုကောင်းပါတယ်။ အလွန်လဲ ၀မ်းမြောက်ရပါတယ်။ ခုမှသိ ခုမှ ၀င်ကြည့်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တိုင်က ဘာမှ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်မရေးတတ်တော့ ကြိုးစားကြည့်ချင်ပါတယ်။ ၀ီကီက မြန်မာ-ကွန်ပျူတာအင်တာနက် သီသန့်ပဲလား။ တခြား ဆေးပညာ-ဆေးပင်-တိုင်းရင်းဆေး-ကျောင်းပညာရေး စတဲ့ စိတ်၀င်စားဖွယ် Heading တွေ မပါဘူးပေါ့။ ကျွန်တော်က ဆွလိ ဆွလိ နဲ့ အကုန်လုပ်တာ။ ဘာမှ သိပ်မကျန်ဘူး။ ကွန်ပျူတာ အင်တာနက်က အညံ့ဆုံးဖြစ်နေလို့။
ကွန်ပျူတာ ပိုင်းသီးသန့်ပါပဲ။ လိုအပ်ရင် ကျွန်တော်ကတော့ ကျမ်းမာရေးပိုင်း နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဆိုက်တက်ခုလုပ်ချင်ပါတယ်။ အကယ်လို့ အကို ကူညီမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် ဆိုက်တင်ပါ့မယ်။ detail ကတော့ ကျွန်တော့ ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။
နည်းပညာပိုင်း (အင်ဂျင်နီယာ၊ သချင်္ာ ၊ ရူပ စသဖြင့်) ကိုရော လုပ်ပါလားဗျာ။ သူများတွေ လုပ်တာ သုံးမယ့် အစား ကိုယ့်လူတွေ လုပ်တာ အားပေးချင်တယ်ဗျာ။ လူလိုရင် အတတ်နိုင်ဆုံး စည်းရုံးပေးပါ့မယ်။
နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော် ၀င်ပြင်လို့ ပဲ ရတယ်ခင်ဗျ။ အသစ် ၀င်ရေးလို့ မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါလေး တစ်ချက်လောက် လုပ်ပေးပါခင်ဗျ။
ွှTo.......Computer Crazy !
free BSD အကြောင်းရေးထားတဲ့ ebook နဲ့ သူ့ရဲ့အကျဉ်းချုပ်လေးသိရင်ပြောပြပါလား......
MZ wiki အဟောင်းတုန်းကတော့ ၀င်ရေးဖြစ်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ မရေးဖြစ်တာ အတော့်ကိုကြာပြီ။ အခုတော့ ပြန်ပြီး၀င်ရေးပေးပါ့မယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ရေးတာတွေမှားမှာကိုတော့ စိုးရိမ်မိတယ်။ ကိုယ်က အကုန်လုံးကိုသိတဲ့လူမှမဟုတ်တာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သိသလောက်တော့ ၀င်ရေးပေးပါ့မယ်။
(Logo တောင်ဆွဲပြီးပြီလားမသိဘူး ???? Wiki ကိုဝင်မကြည်ရတေးဘူး:D)
ဒီ link http://www.mysteryzillion.com/wiki ကို ကျွန်တော် Browse လုပ်လို့ မရပါ ဘူး။ ကျွန်တော် Joomla CMS နဲ့ ဆိုင်တာတွေ ကိုဝင်ရေးပြီး ကူညီပေးပါမယ်။ Saturngod ရေ ကျွန်တော် Site ကိုတချက် ကြည့်ပေးပါ။ Joomla CMS နဲ့ ပတ်သက်ပြီး POST တွေရေးထားတာရှိပါတယ်။ အဲဒီအတိုင်း OK တယ်ဆိုရင် Saturngod ပြောတဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Wiki မှာ ပြန်ရေးပေးပါမယ်။
http://www.mysteryzillion.com/wiki ကို ကျွန်တော် လဲBrowse လုပ်လို့ မရပါ ဘူး။:((
ကျွန်တော်လဲ Wiki မှာ ရေးပေးပါမယ်။:63:
http://www.mysteryzillion.com/wiki ကို ကျွန်တော်လည်းကောင်းကောင်းဝင်၍မရပါ...
http://www.mysteryzillion.com/wik အကိုရေရတယ်ထားအုံး အိုင်(i) ပြုတ်ကျန်နေတယ်....
http://myanmarwikipedia.org တော့ ကြည့်လို့ရတယ်.........
link ကမရဘူး။ page not found
ကျွန်တော်လည်း သွားပြီး ပညာလေ့လာချင်လို့
အပေါ်ကလိပ်စာက အရင်ကလိပ်စာဖြစ်နေလို့ပါ။ ကိုကုလားကြီး အဲ ကိုကလီးယား သွားချင်ရင်တော့
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ :67:
အဲဒီမြန်မာဘာသာနဲ့ ရေးထားတဲ့ဝီကီတွေက ဘာလို့ဂိုဏ်းကွဲနေတာလဲ။ ကျနော်သုံးခုလောက်တွေ့တယ်။ အဲဒီလိုများနေတော့ ဘာလုပ်ကြရမှာလဲဗျ။ ပုံသေဆိုက်တစ်ခုပဲထားပြီး၊အားလုံးအစုံရေးလို့ ရတဲ့ဟာ ရှိရင်ကောင်းမယ်။
နိုင်ငံတကာမှာလည်း wiki travel , howto wiki စတာတွေ ကွဲလွဲနေသေးတာပဲ.... ကျွန်တော်တို့ MZ ကလည်း နည်းပညာ သီးသန့်လေးသွားနေတာမို့ပါ... ကွဲလွဲနေတာမဟုတ်ပါဘူး... အကုန် ယူပြီးထည့်လို့ရတယ်... ကျွန်တော်တို့ကလည်း GNU ပဲပေးထားတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ article ကို GNU တွေပေးထားပြီးသားပါ
အကူအညီလိုအပ်လျက် ရှိသည်ဆိုတာနဲ့ ရေးဖြစ်သွားတာပါ
အခုထိဘယ်သူမှ သတင်း အသစ် တင်တာမတွေ့သေးလို့ပါ အားလုံး ရိုက်နေကြပါသလားခင်ဗျား မော်မော်တွေလည်း သိပါတယ် ရိုက်ပေးတဲ့လူတွေ မအားကြဘူးဆိုတာပါ တစ်ယောက်တစ်လုံးခြင်းဆီရိုက်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ် တစ်လုံး ကိုမှအများဆုံး34 ရက်လောက်ပဲကြာပါတယ် ကူညီကြပါခင်ဗျား
mz wiki အတွက် logo ဆွဲပေးမယ့်သူများရှိမလား မသိဘူး.. :d
:103:အမ်အမ်သင်ကာ ကိုဆွဲခိုင်းလိုက်လေ။ သူဆွဲတတ်တယ်။ မအားလို့နေမှာပါ။ အိုင်တို့တော့ ဘယ်သူဆီသွားလိုပဲ သူများဆီပို့တာပဲတတ်တယ်။\_:d/